Indawo yokuhlala ezimele enengadi /1
Lomé, Maritime, i-Togo
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Edem
Esigodini esidumile saseNyekonakpoe (eduze nolwandle), sebenzisa ngokunenzuzo indawo yokuhlala ezimele ngokugcwele (igumbi lokulala, indlu yokugezela, ikhishi) endaweni ethule, enengadi enomthunzi kanye nethala. Ilungele ukusebenza noma ukuphumula.
Indawo yokuhlala inamakamelo amathathu:
- Igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili, ideski, ikhabethe lezingubo
- ikhishi eline-2-burner gas cooker, ifriji, i-microwave, izitsha nezitsha zokupheka.
- igumbi lokugezela elineshawa, usinki kanye nendlu yangasese.
+ ithala elinetafula lekhofi nezihlalo
+ ingadi enomthunzi (yabiwe nabaqashi besitudiyo esiseduze)
INTENGO: Intengo AYIHLANGANISI izinketho ezilandelayo (ezingavamile ukusetshenziswa abaqashi bethu, yingakho singazifaki enanini lokuqasha):
- I-CLIM: 2€ ngosuku (ikhokhwa esizeni nangaphambi kwesikhathi lapho uyicela).
- I-TV: uma ufisa ukubuka umabonakude, sizokwenza kusebenze ukubhalisa ngokucela ngenani lamanje lomphakeli (canalplus afrique).
- UKUHLANZA: Ukuhlanza kwenziwa ngaphambi kokufika kwakho. Impahla kanye nemikhiqizo yokuhlanza iyatholakala esitudiyo uma ufisa ukuhlanza ngesikhathi uhlala. Ungaphinda ushayele abasebenzi basekhaya ukuze uthole imali okuvunyelwane ngayo (ubuncane be-€3 ngesevisi ngayinye).
- UMSHINI WOKUWASHA: umshini wokuwasha kanye nesihlanzi kuyatholakala uma ucelwa ngo-0.76€ (500FCFA) uma kusetshenziswa ngakunye.
4.58 ·56 okushiwo abanye
4.58 · 56 okushiwo abanye
I-Nyekonakpoe iyindawo yokuhlala ethule kakhulu, elungele ukusebenza noma ukuphumula ngenxa yokuphithizela kwenhloko-dolobha.
I yokuhlala itholakala nedlanzana amamitha ambalwa kusukela Benin isikhundla, a amamitha angamakhulu ambalwa ukusuka Aflao umngcele okuthunyelwe (Togo-Ghana), kodwa ngaphezu kwakho konke eduze nolwandle, abaningi ebhishi nemishayo ukuthi ngeke ukuthole yikuphi kwenye indawo ku-Togolese ogwini nalapho ungafinyelela khona isiko elidumile nelemikhosi ngenkathi ujabulela obhiya bendawo nama-skewers.
Ungangabazi ukusicela amakheli ama-maquis endaweni ngoba kwesinye isikhathi afihlwe kahle!